कोरोना उपचारका लागि अत्यावश्यक मेसिनहरु हस्तान्तरण — donnews.com
प्रमुख समाचार प्रवास स्वास्थ्य
'लायन्स क्लब अफ पोखरा सेती गण्डकीको आयोजना तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको सहयोग'
पोखरा, १५ भदौं । लायन्स क्लब अफ पोखरा सेती गण्डकीको आयोजना तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको सहयोगमा सङ्क्रामक तथा सरुवारोग अस्पताल, लेखनाथलाई कोरोना रोगको उपचारको लागि अत्यावश्यक मेसिन तथा सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका छन् ।
६ लाख रुपैयाँ बराबरका ती मेसिनहरुमा स्वास प्रस्वासमा समस्या भएका गम्भीर विरामीको लागि जीवनदान दिने नन इनभेसिभ भेन्टिलेन बीआइपीएपी मेसिन ३ थान, बेन्स सर्किट ५० थान, बेन्स सर्किट मास्क ५० थान, अक्सिजन मास्क (बच्चाको लागि समेत) १५० थान र नासल प्रोन्ज ५० थान रहेका छन् । स्मरण रहोस्, सो अस्पतालमा सरकारको तर्फबाट कोरोनाको निःशुल्क उपचार हुने गरेको छ ।
सो कार्यक्रमको लागि पोर्टल्याण्ड, अमेरिका निवासी डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. रमेश मरहठ्ठा, दिपेश वैद्य, ध्रुवराज श्रेष्ठबाट १ थान द्यक्ष्एब्ए मेसिन र ३० थान बेन्स सर्किट सहयोग प्राप्त भएको थियो । जर्मनवासी नेपालीहरुको तर्फबाट सर्मिला राजभण्डारी (अर्याल) र सीता गुरुङको संयोजकत्वमा १ थान बीआइपीएपी मेसिन प्राप्त भएको थियो ।
यसै गरी बेल्जियम निवासी हरिकृष्ण कार्की, मोहन के.सी., अमृत के.सी., सी.पी. भट्ट, बेनि ढुङ्गाना, तेजेन्द्र कँडेल, केदार थापा, सुन्दर पौडेल, सूर्य शर्मा, मुना ज्वारचन, अस्मिता घलेको तर्फबाट १ थान द्यक्ष्एब्ए मेसिन प्राप्त भयो । अस्ट्रेलिया निवासी विनयकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा त्यहाँका नेपालीहरुबाट अक्सिजन मास्क एकसय ५० थान, न्यासल प्रोन्ज ५० थान, बेन्स सर्किट २० थान प्राप्त भएको थियो ।
क्लबका अध्यक्ष लायन कल्पना थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा पूर्व डिस्ट्रिक गभर्नर लायन ध्रुव थापाज्यू प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । सङ्क्रामक तथा सरुवारोग अस्पतालका व्यवस्थापन समिति सदस्य प्रा.डा. ध्रुवबहादुर अधिकारी तथा सो अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनले सो सहयोग सामग्रीहरु ग्रहण गर्नुभएको थियो ।
ती उपकरणहरुले सो अस्पतालमा निःशुल्क सेवा लिई राख्नु भएका बिरामीहरुलाई अझ उच्चतम सुविधा दिन सकिने कुरा कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनले बताउनुभयो र सहयोगदाता सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा सल्लाहकारद्वय लायन सुनयना पालिखे, लायन सुशिला केसी अधिकारी, जोन चेयरपर्सन लायन अरूणा शेरचन र क्लबका अरू सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन क्लबका सचिव तथा कार्यक्रम संयोजक लायन शान्ति श्रेष्ठ उदासले गर्नुभएको थियो ।